राजसंस्था छिट्टै आउँछ, ज्ञानेन्द्र शाहलाई नै राजा बनाउने हो- केशरबहादुर बिष्ट (भिडियोसहित)::Point Nepal
राजसंस्था छिट्टै आउँछ, ज्ञानेन्द्र शाहलाई नै राजा बनाउने हो- केशरबहादुर बिष्ट (भिडियोसहित)
काठमाडौं, २५ मंसिर । पूर्वमन्त्री केशरबहादुर बिष्टले ज्ञानेन्द्र शाहलाई फेरि राजा बनाउने बताएका छन् । उनले ज्ञानेन्द्र शाहलाई नै राजा बन्ने अधिकार भएकोले बन्ने ठो´कुवा गरे ।
ज्ञानेन्द्र शाहलाई नै राजा बनाउने हो ? प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन्मा ऋषि धमलाको प्रश्नमा बिष्टले भने,‘उहाँ नै राजा बन्ने हो, राजा बन्ने अधिकार ज्ञानेन्द्र शाहलाई नै छ ।’ जतिसक्दो छिटो राजसंस्था फर्कने बताए । देशलाई सं´कटबाट जो´गाउन राजसंस्था ल्याउनु अनिवार्य भएको बताए ।
राजसंस्था फर्कने ठो´कुवा गर्दै अहिले सडकमा समर्थनमा जनता उत्रिएपछि क्या´बिनेटसम्म हल्लिएको बताए । उनले अब राजसंस्था ल्याउन कसैले रोक्न नसक्ने बताए । कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता सन्त नेताले अगुवाई गरेर बनाएको संविधान मा´ओवादीले माँसेको तर्क गरे ।
बिष्टले आफूहरु निरं´कुश राजसंस्थाको पक्षमा कहिले नभएको भन्दै अभिभावक राजाको पक्षमा रहेको बताए । नेपाली काँग्रेसले २००७ सालमा दिल्लीमा राजा र राणासँग संविधानसभाको सम्झौता गरेपनि किन नगरेको ? भनी प्रश्न गरे । उनले भने,‘अब माटोको रक्षाका लागि राजसंस्था चाहिन्छ ।’
जनता सडकमा ओर्लिएर राजसंस्था नहटेको उनको भनाई थियो । राजसंस्था हटाउन विदेशीको इशारामा नेपालका केही नेताहरुले चलखेल गरेको आरोप लगाए । विदेशीले नै आफूहरुका कारण राजसंस्थाको अन्त भएको खुलाइसकेको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘जसको मानो खायो उसैको बैगुन गरेपछि हामीले गरिदिएका हौं भनिरहेका छन् ।’